युगसम्बाद साप्ताहिक - धर्मको स्वाङमा अलमलिएको राजनीति - महेश्वर शर्मा
Saturday, 01.25.2020, 02:55am (GMT+5.5) Home Contact
Thursday, 04.04.2019, 01:29pm (GMT+5.5)
प्रतिस्पर्धा राजनीतिमा हुनैपर्ने तत्व हो भने नेतृत्वमा हुनुपर्ने तत्व चाहिं इमान्दारी र आचरणको शुद्धता हो । जति ठूलो पद उति नै ठूलो जिम्मेवारी नेताको हुन्छ । तर आजको प्रतिस्पर्धा नै ज्यादै घटिया खालको देखिएको छ । दलहरु बदनाम छन् । अनुयायी जति नै खोटी भए पनि र जति नै गन्हाका भए पनि त्यस्तैलाई बोक्ने नेता र जतिसुकै भ्रष्ट र कलंकित भए पनि नेतालाई धुरीमा चढाउने कार्यकर्ताको व्यवहारले आजको राजनीतिक गतिविधि बदनाम भएको छ । तर, नेताहरु यो वास्तविकताप्रति आँखा चिम्लिरहेका छन् ।
राजनीति आज बेजिम्मेवार हिसाबमा संचालित छ । यो नेताहरुकै कमजोरी हो । कार्यकर्ता र अनुयायीले स्वार्थवश नेतालाई अति मानव बनाएर हौस्याइरहेका छन् । नेता भ्रष्ट नै भए पनि गुणगान गरेर उचाल्छन् । अनि नेता पनि मक्ख परेर आफूलाई सु¥याएर स्वार्थ पूरागर्ने नालायकहरुलाई काँधमा चढाएको देखेर जनता रुष्ट भएको पनि थाहा नपाएका हुन् कि कुन्नि ! यो सबै बेफाइदाको परिणाम त आखिर जनताले नै ब्यहोर्नु पर्दछ । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र जनअसन्तोष यिनै र यस्तै भँडुवाहरुकै कारण सिर्जिएको छ ।
आज राजनीति गर्नेहरुले धर्मको प्रशस्त दुरुपयोग गरेका छन् । माक्र्सले धर्म अफिम भनेको पनि बेठिक होइन । किनभने धर्मको लत बसेपछि मान्छेले सितिमिति धर्म छोड्दैन अफिमकै जस्तो लत बस्छ धर्मको पनि । नेताले धर्म छोड्यौ अथवा धर्मनिरपेक्ष भन्नु स्वाङ मात्रै हो । पण्डित–पुरोहितले गंगाजल र गहुँत छर्केर पवित्र हुने ठाउँमा आजका स्वाँङीहरु विधर्मीबाट वाइन छर्की मागेर वाइनपान गरेर धर्म निरपेक्ष भन्न थालेका छन् ।
संसारमा धर्मकै नाममा देश विभाजित भएका छन् । धर्मकै कारण लडाई भएका छन् । धर्मकै नाममा दंगा भड्केका छन् । सोझासिधा जनतालाई धर्मका नाममा भ्रमित पारेर स्वार्थसिद्ध गर्नेमा धर्मका स्वाङ गर्ने धर्मनिरपेक्षतावादी नै छन् । यिनीहरु सप्ताह–पुराण लगाएर पैसा पनि असुल्छन्, धर्म मान्दैनौं पनि भन्छन् । यही सरकारले नै आयोजना गरेको एसिया–प्यासिफिक समिट पनि क्रिश्चियन धर्म प्रचारकै लागि थियो । तर चौटा खान हिंड्दा झोलमा डुबेजस्तो प्रधानमन्त्री ओलीजी र उहाँको पार्टीलाई धर्मको स्वाङमा अलमलिएको देखेर जनताले धिक्कारेको होस चाहिं आयो कि आएन कुन्नि ?
यथार्थमा ठूला पदमा बस्ने मान्छे सावधान भएर मातहतका क्रियाकलापमा ध्यान दिएर जनसरोकारका विषयमा कमी कमजारी हुन नदिने दायित्व नेतृत्वमै हुन्छ । तर नेतृत्व नै आफ्नो दायित्वबाट च्यूत हुन्छ भने अरुबाट असल कामको अपेक्षा राख्नु व्यर्थ हुन्छ । आजसम्मको गतिविधिबाट नेतालाई चाहिएको सत्ता मात्र रहेछ, जनता र प्रजातन्त्र भन्ने अनुभव भएको छ । जनताका लागि प्रजातन्त्र त आउँनै दिएनन् । प्रजातन्त्रलाई त नेताका स्वार्थपूर्तिका साधन मात्र बनाएको अनुभूति भैरहेको छ ।
कार्यकर्ता र अनुयायीका गुण अवगुण र सामथ्र्यको मात्रा अनुसार प्रश्रय र स्थान दिनपर्नेमा आफ्नै गुणगान गर्नेलाई अघिसार्ने गर्नाले असल कार्यकर्ता फालिने गरेका कारण गुटबन्दी सिर्जना भएको दोष नेताहरुमै जान्छ । राजनीति स्वच्छ नहुनुको कारण पनि त्यही हो । जनताकै लागि काम गर्ने हो भने फोस्रा भाषण होइन कामै गरेर विश्वास लिन सक्नुपर्छ ।
राजनीतिमा आज चर्को असहिष्णुता देखिएको छ । एकले अर्कालाई होच्याउने र नसहने प्रवृत्ति बढ्दो छ । अरुको निन्दा गरेर आफू असल देखिन खोज्नु कुनै गुण र योग्यता होइन, बरु अवगुण मान्नुपर्दछ । अनावश्यक विवाद र इष्र्या–द्वेष अनि सत्तोसराप गरेर होइन, आफ्नै सदाचरणबाट उठ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हो, जुन कुराको आज निकै खाँचो छ ।
त्यसो त सत्ता भनेकै अहमको स्वरुप हुन्छ, तैपनि त्यो सुहाउँदो भएन र संयमको सीमा नाघ्यो भने राम्रो मानिंदैछ । आजका सत्ताधारीहरुमा अहम्को मात्रा बढ्दो क्रममा देखिनाले सीमा ननाघोस भन्नु पनि धर्म नै हो । राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई ध्यानमा राखिनुपर्छ । बहुमतलाई मातमा जान दिन हुँदैन । उत्ताउलो काम नहोस् । खोटा काम गर्नेलाई आफ्नो मान्छे भनेर जोगाउने काम भयो भने त्यस्तो प्रवृत्तिले नेतालाई या मन्त्रीलाई मात्र होइन, सम्बन्धित दललाई हानी हुन्छ । राजनीतिक स्वार्थमा धर्मको स्वाङ नगरियोस् भन्नु पनि अर्घेल्याई हुने छैन ।